PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - KUME NSE YONKE INTO BEKHALA NGENTUTHUKO
KUME NSE YONKE INTO BEKHALA NGENTUTHUKO
KUSUKE uthuli lwezichwe ngoLwesibili KwaSkhemelele, KwaMhlabuyalingana, enyakathompumalanga yeKwaZulu-Natal, ngesikhathi amalunga omphakathi wakwawadi 6 evala umgwaqo ekhala ngokugqoza kwentuthuko okuthiwa ikhetha iphela emasini uma kwenzekile yafika.
Lo mphakathi, obuthukuthele ugane unwabu, uvale lo mgwaqo owumgogodla wempilo yabantu abaningi KwaMhlabuyalingana. Usetshenziswa ngabahwebi abasebenzisa idolobha lendawo, iSkhemelele, abezempilo abahambisa igazi emitholampilo, amabhasi athutha umphakathi uma uyothola usizo losonhlalakahle eMboza nezinye izinhlaka zomphakathi ezibalulekile.
Phakathi kokunye umphakathi okhala ngakho yikhansela lendawo, uMnu December Mathenjwa, okuthiwa liqasha ngokobungani uma kwenzeke kwavela amathuba emisebenzi emphakathini.
Ukhala ngokungabikhona kukagesi namanzi - osekuke kwadaleka izigameko ezinyantisayo emphakathini ngenxa yokusweleka kwalezi zidingo.
UMnu Jabulani Malwane, obeyingxenye yombhikisho, uthe babone kungcono ukuba bangene emgwaqweni ukuze kuzoma yonke into ethinta uhulumeni osebenzisa lo mgwaqo.
“Sinqume ukuvala umgwaqo ngoba amakhosikazi ethu ahlangabezana nobunzima emahlathini uma eyotheza izinkuni. Kangifuni nokuyiphatha eyamanzi ngoba baningi abantu abaphunyula ezigebengwini esezithole ithuba lokubamba inkunzi kudlalwe ngabantu. Ziningi izigameko ezinyantisayo ezenzeka ngenxa yokungabikhona kwamanzi.
“Kudlwengulwa izingane ziyokha amanzi emifuleni, kubanjwa izingane emakhaya abazali beyofuna amanzi emihosheni. Kasisakwazi ngisho nokwelamanisa emakhosikazini ethu ngenxa yesomiso esidla lubi,” kusho uMnu Malwane.
UNkk Sindisiwe Ngwane uthe: “Kusukela ngiyintombi ngingakagani, sasitshelwa ukuthi ugesi uzongena kodwa kuze kube yimanje lutho. Kuningi okusivelelayo lapha emakhaya ngenxa yokungabikhona kukagesi. Kusha izingane zishiswa ngamakhandlela nomlilo. Siyacela uhulumeni nomasipala ukuba baluthathele phezulu udaba lwethu lokungabi nawo ugesi ngoba kuphela abantu lapha endaweni”.
UMnu Mathenjwa uthe udaba lokufakwa kukagesi emphakathini luyalungiswa ukuze abantu baphile impilo efanayo.
“Maqondana nodaba lokuqashwa kwabantu, kangiqashi ngokukhetha abantu ngokwezinhlangano okanye ngokobuhlobo. Abantu baKwaLulwane sizobafakela ugesi. Kusezinhlelweni zikamasipala ukuba kufakelwe wonke umuntu ophila ngaphansi kwawo ugesi.
“Siyacela ukuba abantu babekezele sizobafakela ugesi,” kusho uMnu Mathenjwa othe umatasa nezingxoxo nezinkampani okufanele ziyovula amathuba emisebenzi ewadini yakhe.
Kasisakwazi nokwelamanisa emakhosikazini ethu ngenxa yesomiso.